MacOS Yakakwira Sierra Ruzhinji Beta Zvino Yave Kuwanikwa | Ndinobva mac
Nezuro vhezheni yacho yakaburitswa macOS Yakakwira Sierra yeruzhinji beta 3 yevashandisi vese vanyoreswa kuApple yeruzhinji beta chirongwa. Mupfungwa iyi, yeruzhinji beta vhezheni inogara iri nhanho imwe kumashure kweshanduro dzebeta dzevagadziri maererano nenhamba, asi musimboti ivo vanowedzera iwo matsva akafanana mune ese mavhezheni.
Muvhuro wapfuura iyo vhezheni yakatumirwa beta 4 yevagadziri uye kubva nezuro masikati vazhinji vevashandisi vane voruzhinji vhezheni yesisitimu yekushandisa yakaiswa. Mune iyi vhezheni vhezheni shanduko dzakanangiswa zvakananga pa mashandiro, kugadzirisa zvipembenene uye kugadzikana kwesisitimu.
Apple yasvika muna Nyamavhuvhu apfuura kuti ivandudze vhezheni yeMacOS High Sierra uye kuyedza iyo yakawedzerwa kuvandudzwa, saka inofanirwa kuburitswa kune vese vashandisi uye zvigadziriso zvichave zvidiki. Chero zvazvingaitika, iri vhezheni isinga wedzere kuwanda kwekushongedza kana kwekushanduka kwesimba kunoonekwa kune mushandisi, asi kana iwe ukawedzera shanduko dzakawanda kuhurongwa pachahwo senge nhau muSafari, nzira yekuchengetera mafaera uye yekuratidza mavhidhiyo ane fomati yeHEVC, pakati pezvimwe zvekuvandudza.
Izvo zvinogara zvakanaka kuyeuka kuti iri idzva beta vhezheni uye unofanirwa kuitora yakadaro, saka kuisa iyi yeruzhinji vhezheni yakanaka kuve pakati pekutanga kuyedza izvo zvitsva asi zvirinani kuzviita pane yekunze disk , partition kana Mac pane kusanyanya kuve main. Nenzira iyi, chatichazodzivirira ndechekuti kukundikana uko beta iyi ingadai yakave dambudziko rekushandisa uye kuva neruzivo rwakashata nezvayo. Kana iwe uchida kuwana iyo beta kwenguva yekutanga iwe unogona kuzviita kubva pano uye kana iwe watove neruzhinji beta 2 yakaiswa pane yako Mac, iwe uchawana iyo yekuvandudza mune Mac App Store> Dzidzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » MacOS High Sierra yeruzhinji beta yave kuwanikwa
Raira-Tab Uyezve uye Photo Focus, iri kutengeswa kwenguva shoma
Adobe inomira kugadzira uye kugovera Adobe Flash pakupera kwa2020